Melody World ကြောင့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေဖြစ်လာကြသူများ
7 Aug 2018 . 3:48 PM
(၂၀၀၇) ခုနှစ်ကစခဲ့တဲ့ Melody World ဆိုတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးက လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ Myanmar Idol လို အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမရှိခင်ကတည်းက အရည်အချင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြတဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေများစွာ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ဒိုင်တွေရဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေကြောင့်လည်း အဲ့ဒီအချိန်တည်းက နာမည်ပျက်မရှိခဲ့တာပါ။
လက်ရှိမှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်း၊ နီနီခင်ဇော်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်၊ကောင်းကောင်း၊ ထက်နေကြည်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ၊ ကိုကိုမောင်(ကွယ်လွန်) ၊ ဂျူဝယ်၊ သာဒီးလူ၊ လိမ္မော်သီး နဲ့ ရွှေရည်ဖြိုးမောင် အစရှိတဲ့ အဆိုတော်တွေဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်ဘ၀ကတစ်ဆင့် နာမည်ရလာတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေလည်း သိပြီးသားနေမှာပါ။
လတ်တလောမှာတော့ တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးများစွာထွက်ရှိထားတဲ့ အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ကတော့ သူ့ရဲ့Melody World က အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့ ချမ်းချမ်း၊ ဂျူဝယ်၊ ထက်နေကြည်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ တို့နဲ့အတူ ပြန်လည်ဆုံဖြစ်ကြတဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကို “မမေ့နိုင်သော မြတ်နိုးသော Melody World မှ မကြာခင် Melody World Fans တွေအတွက် ?
WearefromMelodyWorld”လို့ ရေးသားကာ လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေထားပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ အနုပညာလောကမှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်အသံနဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေသီဆိုရင်း နေရာတစ်နေရာအခိုင်အမာရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီး အရင်လိုလူသိများလာမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်တွေအားပေးကြဦးမှာလား။
Photos Credit – Ni Ni Khin Zaw Facebook
Melody World ကွောငျ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတှဖွေဈလာကွသူမြား
(၂၀၀၇) ခုနှဈကစခဲ့တဲ့ Melody World ဆိုတဲ့ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးက လကျရှိခတျေစားနတေဲ့ Myanmar Idol လို အဆိုပွိုငျပှဲကွီးမရှိခငျကတညျးက အရညျအခငျြးရှိတဲ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတှကေို မှေးထုတျပေးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အနယျနယျအရပျရပျက အဆိုတျောဖွဈဖို့စိတျအားထကျသနျကွတဲ့ ဝါသနာရှငျတှမြေားစှာ လာရောကျယှဉျပွိုငျကွတဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ဒိုငျတှရေဲ့ မှနျမှနျကနျကနျဝဖေနျထောကျပွမှုတှကွေောငျ့လညျး အဲ့ဒီအခြိနျတညျးက နာမညျပကျြမရှိခဲ့တာပါ။
လကျရှိမှာ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိနကွေပွီဖွဈတဲ့ အဆိုတျောခမျြးခမျြး၊ နီနီခငျဇျော၊ အိုငျရငျးဇငျမာမွငျ့၊ကောငျးကောငျး၊ ထကျနကွေညျ၊ ဖွိုးပွညျ့စုံ၊ ကိုကိုမောငျ(ကှယျလှနျ) ၊ ဂြူဝယျ၊ သာဒီးလူ၊ လိမ်မျောသီး နဲ့ ရှရေညျဖွိုးမောငျ အစရှိတဲ့ အဆိုတျောတှဟော ပွိုငျပှဲဝငျဘဝကတဈဆငျ့ နာမညျရလာတယျဆိုတာ ပရိသတျတှလေညျး သိပွီးသားနမှောပါ။
လတျတလောမှာတော့ တဈကိုယျတျောတေးစီးရီးမြားစှာထှကျရှိထားတဲ့ အဆိုတျော နီနီခငျဇျောကတော့ သူ့ရဲ့Melody World က အပေါငျးအပါတှဖွေဈတဲ့ ခမျြးခမျြး၊ ဂြူဝယျ၊ ထကျနကွေညျ၊ ဖွိုးပွညျ့စုံ တို့နဲ့အတူ ပွနျလညျဆုံဖွဈကွတဲ့ အမှတျတရပုံရိပျတှကေို “မမနေို့ငျသော မွတျနိုးသော Melody World မှ မကွာခငျ Melody World Fans တှအေတှကျ ?
WearefromMelodyWorld”လို့ ရေးသားကာ လူမှုကှနျရကျမှာ မြှဝထေားပါတယျ။ သူတို့အားလုံးဟာ အနုပညာလောကမှာ ကိုယျပိုငျဟနျကိုယျပိုငျအသံနဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှသေီဆိုရငျး နရောတဈနရောအခိုငျအမာရရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ Melody World သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီး အရငျလိုလူသိမြားလာမယျဆိုရငျ ပရိသတျတှအေားပေးကွဦးမှာလား။